घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » यदि यो तपाइँको प्रेस विज्ञप्ति हो भने यहाँ क्लिक गर्नुहोस्! » क्यान्सर चेतावनी: ईर्टबर्न खतरनाक हुन सक्छ
यस हप्ता, अमेरिकाले पत्ता लगायो कि GERD वा Gastroesophageal Reflux Disease राष्ट्रपति बिडेनको घाँटी सफा गर्ने कारण हो। सामान्यतया, GERD को लक्षणहरूले धेरै सूचना प्राप्त गर्दैन। र त्यो खतरनाक हुन सक्छ।
रिफ्लक्स रोगले Esophageal क्यान्सर निम्त्याउन सक्छ। घाँटी सफा हुनु, घाँटी दुख्नु, कर्कश आवाज आउनु, लगातार खोकी लाग्नु, सुत्दा निसास्नु, दाँत खरानी हुनु पनि GERD का कम ज्ञात लक्षणहरू हुन्। हार्टबर्न सबैलाई थाहा भएको एउटा लक्षण हो।
धेरै अमेरिकीहरूका लागि, यी लक्षणहरू उनीहरूको मात्र चेतावनी हुन् कि उनीहरू क्यान्सरको जोखिममा छन्।
यो GERD जागरूकता सप्ताह हो - थ्यांक्सगिभिङको लचकतासँग मेल खान्छ। तर तपाईले GERD अनुभव गर्न धेरै खानु पर्दैन र यसले तपाईको स्वास्थ्यलाई निम्त्याउन सक्छ।
चक्की उत्तर नहुन सक्छ
धेरैले ईर्ष्यालाई जीवनको तथ्यको रूपमा हेर्छन् र तिनीहरूका लक्षणहरू कम गर्न ओभर-द-काउन्टर औषधिहरू प्रयोग गर्छन्। दुर्भाग्यवश, लक्षण राहतले पेटको एसिड र पित्तको ब्याकफ्लोको क्षतिलाई हटाउन सक्दैन।
औषधिले कास्टिक पेट सामग्रीको स्प्रेलाई रोक्दैन जसले ब्यारेटको एसोफ्यागस भनेर चिनिने पूर्व-क्यान्सर अवस्था निम्त्याउन सक्छ। यो तब हुन्छ जब तपाईंको अन्ननलीको अस्तर तपाईंको पेटसँग मिल्दोजुल्दो हुन्छ। केहि को लागी, यो Esophageal क्यान्सर को घातक प्रगति मा परिणाम छ।
अलार्मलाई बेवास्ता नगर्नुहोस्
ब्यारेटको एसोफ्यागसले कुनै लक्षणहरू निम्त्याउँदैन। यसको मतलब GERD लक्षणहरू तपाईंको मात्र चेतावनी हुन सक्छ - र तपाईंको जीवन बचाउनको लागि महत्वपूर्ण हुन सक्छ!
चाँडै समातिएमा, Esophageal क्यान्सर रोक्न सकिन्छ। बाहिरी रोगी प्रक्रियाहरूले ब्यारेटको तन्तुलाई हटाउन सक्छ र क्यान्सर सुरु हुनु अघि नै रोक्न सक्छ।
के तपाई जोखिममा हुनुहुन्छ?
लाखौं अमेरिकीहरूसँग अहिले ब्यारेटको एसोफ्यागस छ - र यो थाहा छैन।
धेरै पटक, मेरो श्रीमान्को मामला जस्तै, Esophageal क्यान्सर भएका बिरामीहरूले अचानक निल्न नसक्ने बेलासम्म उनीहरूलाई समस्या भएको थाहा हुँदैन। एकचोटि तिनीहरू त्यो बिन्दुमा पुगेपछि, बाँच्नको लागि मायावी हुन्छ। Esophageal क्यान्सर भएको पत्ता लागेको पाँचमध्ये एक जना मात्र पाँच वर्षसम्म बाँच्न सक्छन्।
यो किनभने यो रोग सामान्यतया यति ढिलो समातिन्छ कि उपचार विरलै प्रभावकारी हुन्छ।
तर यो चाँडै समात्न सकिन्छ - र रोक्न।
जाँच गर्न सजिलो
पहिलो पटक, अमेरिकी बिरामीहरूले अब सजिलैसँग आफ्नो जोखिम पत्ता लगाउन सक्छन्। गोली-आकारको EsoCheck उपकरणको द्रुत निगलले तिनीहरूको अन्ननलीको सजिलो र किफायती जाँच दिन्छ। EsoGuard परीक्षणले ब्यारेटको एसोफ्यागसको उपस्थितिको मूल्याङ्कन गर्न डीएनए प्रयोग गर्दछ।
परीक्षणहरू डाक्टरहरूको कार्यालयहरूमा र फिनिक्स, लस भेगास, डेनभर, र साल्ट लेक सिटीका स्क्रीनिंग केन्द्रहरूमा उपलब्ध छन् - आउने महिनाहरूमा थप स्थानहरू योजना गरिएको छ। EsoGuard.com मा थप जान्नुहोस्।
धन्यबाद, GERD भएका अधिकांश मानिसहरूले क्यान्सर विकास गर्दैनन्।
तर यो एक रोग होइन जुन तपाईं मौकामा छोड्न हिम्मत गर्नुहुन्छ।
जाँच गर्नु भनेको तपाईंले माया गर्नेहरूलाई दिन सक्ने सबैभन्दा ठूलो उपहार हो।
मेरो जस्तै हजारौं परिवारहरूलाई सोध्नुहोस् कि Esophageal क्यान्सरले छुट्टीको समयमा खाली सिट छोडेको छ।
Mindy Mintz Mordecai Esophageal Cancer Action Network, Inc. (ECAN) को संस्थापक हुनुहुन्छ। उनका छोराछोरी नौ र बाह्र वर्षका हुँदा उनले आफ्नो पतिलाई एसोफेजल क्यान्सरबाट गुमाइन्।